Blithely — Steemit
ကျွန်ုပ်တို့၏ထိန်းငါတို့သားသမီးပြုစုပျိုးထောင်ငှားရမ်းထားအကူအညီနဲ့ထွက်ခွာပါကကျွန်တော် blithely ဂျက်ချွတ်ကဲ့သို့မြည်စေသည်။
ဒါဟာမကြာခဏငါ့အလေးတွေထဲကတစ်ခုနှင့်အတူလူတန်းစားကာလအတွင်းတွေ့ကြုံတတ်၏။ ကျနော်တို့အတူတူနေ, ငါ, ငါ့ 3- သို့မဟုတ်5နှစ်အရွယ်နှင့်အတူ "Co-သင်ယူမှု" relishing တာပါ။
သိသိသာသာငါဖြစ်၏ပင်ထက်အသက်ကြီးမယ့်သူတစ်ဦး, ငါ didn သောသူတို့အားသက်ကြီးရွယ်အိုများအံ့ဘွယ်သောအမှုတစျခုပါပဲ - ငါထကြည့်ရှုကာစေ့စပ်, adoring စောင့်ရှောက်သူများနှင့်အတူအချို့သောအခြားဆိတ်သငယ်သတိထားမိ (? သင်တစ်ဦးလိပ်ရဲ့အခွံပေါ်တွင်ရင်ပြင် scutes ဟုခေါ်ကြသည်သိပါသလား) '' t ကိုသူမ၏ 40 သည်အထိကလေးမွေးဖွားပေးလေ့ရှိသည်။ ကျွန်မကလေးကသူ့အဖွားနှင့်အတူကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်။ ငါ့ကလေးတွေအတွက်ဝမ်းနည်းခံစားရသည်။ ဒါဟာ "ဟုအဆိုပါလေးတွေစောင့်ရှောက်တာရဲ့အဘယ်သူသည်?" ကျွန်မခင်ပွန်းနဲ့ကျွန်မမြို့ထဲကသွားကြသည်အခါရှားပါးအခါသမယအပေါ်လည်းဖြစ်ပျက်, sans ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးငယ်များနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကမေးတယ်ကျွန်မခင်ပွန်းကျွန်တော် 'ကိုမည်သို့ ပတ်သက်. တာဝန်, ပင်ပန်းဟာသစေသည် သူတို့နှင့်ခွေးများအတွက်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်ရေစွန့်ခွာကြည့်။ ပြီးတော့ကျနော်တို့ကျနော်တို့ထိန်းကိုချစ် "။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထိန်း" ဖြေဆိုပေမယ့်ငါအဖြေကိုငါမုန်း၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထိန်းကျွန်တော်တစ်ဦးဝန်ထမ်းရှိသည်သောလူများ, ထက်အလုပ်လုပ်နှင့်ကလေးထိန်းထားဖို့လိုသူတွေကိုများမှာကဲ့သို့မြည်စေသည်။
2ကျွန်ုပ်တို့၏ထိန်းအကြှနျုပျ၏လေးတွေရက်အနည်းငယ်အဘို့ထိုသူတို့ဂရုစိုက်မည်သူအဘိုးအဘွားရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးငါ့ကိုသတိပေးနေပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်နေ့ဖြစ်၏။ သို့မဟုတ်ညဦးယံ။ ဘိုးဘွားငြူစူခြင်း: သူများသည်အချိန်ကာလကငါ့ကိုထိခိုက်လာသောအခါဖြစ်ကြသည်။ ငါ့ကိုမှားယွင်းတဲ့ရမနေပါနဲ့, ငါတို့ကလေးတွေအဘိုးအဘွားရှိသည်။ တကယ်တော့သူတို့ကိုမချစ်တဲ့သူအဘိုးအဘွား။ ငါ့အဘနှင့်ကျွန်မခင်ပွန်းရဲ့အမေအသက်ရှင်ရကြ၏။ ငါ့အဖေ (ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့သူတို့၏ "Pooh", "Winnie အဆိုပါ ... ") ဖလော်ရီဒါအတွက်, ငါတို့သည်နယူးယောက်မြို့၌ရှိကြ၏။ ထိုသားသည်ငါ့ Judeo-ခရစ်ယာန်လေးတွေမှဟယ်လို / Hanukkah / ချစ်သူများနေ့ / အီစတာကတ်များပို့ပေးအမြဲတမ်းကျနော်တို့ FaceTime အပေါ်ချေါသောအခါဖွကွေား။ သူဟာဖြစ်နိုင်သည်မထားဘဲကျွန်တော်ယူမထားတဲ့, ဖွစျနိုငျသကဲ့သို့ရက်ရက်ရောရောပါပဲ။
ငါ့အမိ-In-ဥပဒကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်းပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့ပေမယ့်သူမအလုပ်ဖြစ်တယ်, သူ့ကတိကဝတ်နီးပါးအားလုံးသူမ၏အချိန်ပိုင်ဆိုင်တယ်။ သူမသည်ရံဖန်ရံခါနေ့လည်စာစားရနျကြှနျုပျတို့၏သားကြာပါသည်။ သူတို့ကပီဇာကိုစားနှင့်သူမ၏ဖုန်းပေါ်မှာချို့ယွင်းမှုများ Bunny စောင့်နေကြလော့။ ငါ၏အကောင်လေးနှင့်သူ၏အဘွားငါမျက်နှာပြင်အချိန်နှင့်အမျှအလွန်ကြီးစွာသောအပြစ်အတိုင်းလိုက်နာသောဒိုးနတ်ယူဆပါသည်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်, ဒါသူတို့ပါပြီ - grandkids နှင့်အဘိုးအဘွား်၏အဖြစ် - တဟီဟီရယ်သူတို့သညျငါ့ကိုပေါ်တချက်ဆွဲထုတ်အဖြစ်, သူတို့ရဲ့ရိပ်မိဘုံရန်ဘက်ပြုမည်။ ကျနော်တို့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းတွင်ကလေးအဖြစ်ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူအသက်အရွယ်ရ။ Pooh ဆီးချိုရောဂါရှိပါတယ်; အဖွားမကောင်းတဲ့တင်ပါးရှိပါတယ်။ သူတို့ကနည်းနည်းနောကျမှာပွေးနိုငျပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ 70 ခုနှစ်နှစ်ဦးစလုံးသူတို့မကြာခဏသူတို့ကြေညာ "အဟောင်းကို။ " ငါ့အမေကသူ့အစောပိုင်း 70 ခုနှစ်ဟောင်းဖြစ်ရပြီမလား? ငါဒါမစဉ်းစားကြဘူး။
သူမ 53 မှာကွယ်လွန်သွားပြီးကတည်းကဒါဟာငါ 26 တုန်းကအမေငြူစူခြင်းအချိန်ကြာမြင့်စွာကြာမြင့်, သူမ၏ senescence မြင်ယောင်ရန်ခဲယဉ်းပါတယ်။ ဒါဟာနေဆဲငါ့ကို haunts ဒါပေမယ့်၏နာကျင်ကိုက်ခဲနာကျင်မှု, ငါခေါ်သို့မဟုတ်စျေးဝယ်မင်္ဂလာဆောင်တွင်ဆင်မြန်းသို့မဟုတ်ကလေးအဝတ်အဘို့နှင့်အတူသို့မဟုတ်ရိုးရိုးပစ္စုပ္ပန်တင်းမာနေအတွက်ဖော်ပြ moms သူမိန်းမတို့အားတာဝန်ပေးအပ်ပူအဓိပ်ပါယျမရှိသောမကျေနပ်မှု - အချိန်နှင့်အမျှ attenuated သူတို့အားခံစားချက်များကို။ သင်ရုံ ... ဆုံးရှုံးဖို့အသုံးပြုရ။
ဒါနဲ့အကြီးအကျယ်အဖွားငြူစူခြင်းနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခံရဖို့ငါ့အမိငြူစူခြင်း, မကောင်းဆိုးဝါးချွတ်ရှိခြင်း, ပြေးလမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ မိခင်တစ်ဦးဖြစ်လာငါ့ကလေးတွေကိုယ်စားနှင့်သူမ၏ကိုယ်စားအသစ်တစ်ခုလမ်း၌ငါ့အမိ၏ဆုံးရှုံးမှုကိုခံစားရစေတော်မူ၏။ သူတို့ကိုငါသည်ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်း - သူတို့သူမ၏လက်ချောင်းများဟာသူတို့ရဲ့ဆံပင်နှင့်အတူဆော့ကစားသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏နည်းနည်း buttery လက်ချောင်းများမှတဆင့်တစ်မီးဖိုချောင်ကိုဖြတ်ပြီးသူမ၏အိမ်လုပ် taffy ဆွဲထုတ်ခံစားရဘယ်တော့မှသော။ "!" My darlin "သူမ၏ချုပ်သို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်သူမ၏ရောင်ခြည်နှင့်သူမ၏ကြွေးကြော်သောစကားကိုနားထောင်ရန်အတွက်သူတို့ကသူမကိုအမြဲ-နုပျိုအသံတစ်ဟယ်လိုဝတ်စုံဒီဇိုင်းဘယ်တော့မှသူ့ကိုငါသည်ငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်း - သူမကသူတို့ရဲ့မဆုတ်မနစ် exuberant ကိုသိဘယ်တော့မှကြောင်းသို့မဟုတ် သူတို့ရဲ့ကခုန် "ဒါဟာအဝတ်အချည်းစည်းခါ" သို့မဟုတ်တစ်ဦးနှုတ်ခမ်း mammogram ကဲ့သို့သင်တို့ပါးစပ်တပ်များသို့မဟုတ်ငါ့သမီးလမ်းပေါ်မှာ disheveled hipsters အထိလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်သူမ၏အလွန်သေးငယ်သော, စိုးရိမ်ပူပန်အသံသူတို့ကိုမေးဖို့စောင့်ရှောက်မည်အကြောင်းငါ့သား၏အနမ်းခံစားရကိုမြင်၏ "သင်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ပါသလား" သင့်ရဲ့မိဘများကိုသူတို့ဖွင့်ပြသလျှင်ပင်, ဘိုးဘွားငြူစူခြင်းသင်နှင့်အတူ resonate စေခြင်းငှါ, အောင်အသက်ရှင်ရကြ၏ရင်တောင်။ တော်စတွိုင်းရဲ့ fungible ပျော်ရွှင်မိသားစုများကဲ့သို့ပင်အားလုံး unimpeachable အဘိုးအဘွားယုံကြည်စိတ်ချရသောပစ္စုပ္ပန်နှင့်စိတ်အားထက်သန်စွာအထောက်အကူဖြစ်စေဖြစ်ကြသည်။ နှင့်သူ၏မပျော်မိသားစုများကဲ့သို့ပင်ဒါရရှိနိုင်မဟုတ်သူသက်ကြီးပိုင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်း ungrandparenty ဖြစ်ကြသည်။ လေးနက်ခြင်းနှင့်ဝမ်းနည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေအဘိုးအဘွားတပိုင်တနိုင်ဆပ်။ အခြားသူများကိုလာရောက်လည်ပတ်သူအဘို့အကွာအဝေးခရီးသွားလာမတတ်နိုင်လို့မရပါဘူး။ ယနေ့အဟောင်းတွေမိဘများအဟောင်းတွေအဘိုးအဘွားဆိုလို။ ငါတကာအဖေနည်းပညာပိုင်းအနေနဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုလူကိုကြောင်းကိုမေ့လျော့။ ငါမကြာသေးမီကသူ့ကိုငါ့သမီးနဲ့သေးသေးလေး Belle, Gaston နှင့်Lumière, ငါ့နှလုံးနာကျင်နှင့်အတူဆော့ကစားရန်အကော်ဇောပေါ်ကဆင်းရဖို့, ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်အတူရုန်းကန်စောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာ။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘွားစိတ်ကူးယဉ်ပျက်ကြစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်ကိုယ့်ကိုပိုပြီးအသက်ကွီးရှယျအိုမြားမဟုတ်ပါဘူး။ ယင်းရောင်စဉ်၏အခြားအဆုံးတွင်, US ရှိပထမဦးဆုံးအချိန်ဘိုးဘွားများ၏ပျမ်းမျှအသက်အမေရိကန်ဒေသစစ်တမ်းများတည်ထောင်သူပတေရုသ Francese ကစီမံကိန်းနှင့်အညီ, 52 ဖြစ်ပါတယ်။ (ငါက 52 ပေါ့သောအခါအကြှနျုပျ၏သမီး9ပါလိမ့်မည် - ။ ငါသူမ၏ချေးငှားရန်န်းကျင်ဆို tampons ရှိသည်မဟုတ်မည်) 65 နှစ်အောက်အဘိုးအဘှားအားလုံးအဘိုးအဘွား၏ထက်ဝက်တက်အောင်, သူတို့တစ်အများစုအလုပ်လုပ်ကြသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ကလေးတွေအတွက်နှင့် grandkids န်းကျင် revolve မအလုပ်အကိုင်များနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်ယောဂ Cruise နဲ့ဘဝတွေကိုရှိအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သငျသညျအစဉျအမွဲဘိုးဘွားငြူစူခြင်းခံစားခဲ့ရပါတယ်လျှင်, သင်ကသင်ကအပေါ်ကိုတက်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လို့ရပါတယ်ငါသိ၏။ ငါသည်ငါ၏သားရဲ့အတန်းဖော်ကသူ့အဖွားရဲ့လက်ကိုကိုင်ပြီးကျောင်းကိုထံမှအိမ်ပြန်လမ်းလျှောက်မြင်သောအခါ၎င်းသည်, ကျောင်းကြို-Up မှာငါ့ကိုတာမျိုး; ငါသည်ငါ့ဋမှာ nana နှင့်ဘိန်းကိုမြင်သောအခါ
upvotebank (65) ·2years ago
discoversteem (5) ·2years ago
Daily UpvoteBank Report #27 - New Free Upvote Service by @upvotebank